Zanu PF Inotenda Gwaro Raburitswa naAmai Douhan
Bato reZANU PF nhasi raenderera mberi nemusangano waro weAnnual National People’s Conference nhengo dzeCentral Committieedzichisangana muHarare apo mutungamiriri waro nenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatenda nhumwa yeUnited Nations, Amai Alena Dohan, nekutura gwaro rekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Vachivhura musangano weCentral Committee nhasi, VaMnangagwa vati vanofara kuti Amai Douhan vasimbisamashoko avagara vachitaura kuti zvirango izvi zvibviswe.
VaMnangagwa vatiwo musangano wegore rino uri kuitwa apo bato ravo rakarasikirwa nemagamba makumi maviri nemumwe nenhengo dzinodarika zana vazhinji vavo nekuda kwedenda re Covid 19.
Vati nekuda kwaizvozvo Zanu PF inofanira kuramba iri pamberi pekukurudzira vanhu kubayiwa nhoma yekudzivirira Covid-19 sezvo hurumende iri kupa nhomba idzi pachena.
Mazita emagamba aya anosanganisira, Dr Ellen Gwaradzimba, VaDouglas Nyikayaramba, VaSibusiso Moyo, VaParadzai Zimondi nevamwe, averengwa pamusangano uyu uyewo nhengo dzeCentral Committee zaita kanguva kekuvarangarira.
VaMnangagwa vati itariro yavo kuti musangano wegore rino usiye bato ravo rakasimba.
Vati musangano wanhasi wange uri wekuzeya magwaro anofanira kutambirwa nemusangano uchaitwa mangwana neMugovera kuBindura.
VaMnangagwa vati magwaro aya anosanganisira mamiriro akaita zvinhu muZanu PF, mamiriro akaita hupfumi hwenyika pamwe nebasa riri kuitwa nehurumende mukurwisa denda reCovid-19.
Vatendawo nhengo dzeCentral Committee nekukurudzira veruzhinji mukupinda muchirongwa chePfumvudza icho vati chakaita kuti nyika iite goho rakanaka gore rino.
Vakurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzitambire vanhu vakawanda vari kubva kumapato anopikisa akaita seMDC.
Vatiwo vanofara chose kuti bato ravo rakwanisa kuita zvizhinji zvarakavimbisa veruzhinji pasarudzo dza2018 nemisangano yapfuura vakati musangano wegore rino unofanira kuona kuti zvisungo zvese zvaitwa.
Asi mumwe wevatevedzeri vemutauriri weMDC Alliance, VaFelix Mafa, varamba mashoko ekuti nhengo dzebato ravo dziri kuenda kuZanu PF nehuwandu vachiti manyepo ari kutaurwa naVaMnangagwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Wurayayi Zembe, vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemashoko aVaMnangagwa vachiti zvizhinji zvavakavimbisa vanhu ndozvavasati vaiita.
Dr Zembe vati zvinhu zviri kutoramba zvichioma munyika.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindirra rekuti - Growing and Mordenising the Economy Towards Vision 2030, uye uri kuenderera mberi mangwana kuBindura.